★မြန်မာ့အလင်း★: Wiki-Leaks and plausible lies - Where have all the critical thinkers gone?
၁။ နေမဝင်အင်ပါယာကိုပိုင်ထားတဲ.အင်္ဂလိပ်တွေလဲ ကုလား-ဗမာ အေ၇းအခင်းလုပ်လို.အခုလောက်ကျွန်းသေးသေးပဲကျန်တော.တာ ဒါကိုမင်းမငြင်း၇ဲဘူးမဟုတ်လား
၂။ မျက်မှန်တင်ဦးကြီး မြန်မာပြည်မှာကုလား-ဗမာလှူပ်ဆော်လို. ထောင်ထဲမှာသေခါနှီးအထိနေ၇တာမင်းမငြင်း၇ဲဘူးမဟူတ်လား
၃။ ALLH ဖန်ဆင်းတဲ.၇ူမောင်ကြီး ALLAH ကိုစော်ကားလို. ALLAH ၇ဲ.ဆုံးမခြင်းကိုခံ၇တာ အဲ.ဒါလဲ မင်းမငြင်း၇ဲဘူးမလား
၄။ ဦးတင်ဦး S2ကအပြစ်မဲ.တဲ.အဖိုးကြီးတွေကိုဒူက္ခပေးလို. ALLAH ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံ၇တာ အဲ.ဒါမင်းမငြင်း၇ဲဘူးမဟုတ်လား
၅။ ALLAH ဖန်ဆင်းထားတဲ.ဦးခင်ညွန်.နဲ.ထောက်လှမ်းေ၇းအဖွဲ.က ALLAH အိမ်တော်တွေကိုလိုက်ဖျက်လို. ALLAH ဒဏ်ခတ်လိုက်တာ သူ.အိမ်နဲ.သူတောင်မနေနိုင်ဘူး ဆိုတာမင်းမငြင်း၇ဲဘူးမဟုတ်လား
၆။ အစ္စေ၇းက ဗလီတလုံးပဲဖျက်လို. လူ၁၀၀လောက်ပဲသေတာ မင်းတို.က မြန်မာပြည်မှာဗလီပေါင်းများစွာကိုဖျက် မူဆလင်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုး လုယက်လို. ဆူနာမီလာတယ် မာလာအမွှေခံ၇ပြီး ခိုးထားတာတွေပြောင်ပါေ၇ာလား ပြီးတော. နာဂစ်တိုက်ပြီး လူတွေသိန်းပေါင်းများစွာသေသွားတယ် အခုတခါဘ၇င်ဂျီလာပြီးသေကုန်ပြန်ပြီ နောက်နှစ် နောက်နှစ်တွေလဲလာလိမ်.အုံးမယ်
ဘာလို. အဲလောက် အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ.ကြုံ၇လဲသိလား ALLAH ကိုစော်ကားလို. ဖြစ်တာ ဒါကိုမင်းမငြင်း၇ဲဘူးမဟုတ်လား
မင်းသိလား နောက်ဆို၇င် ဗမာဆိုတာမြန်မာပြည်ထဲမှာမ၇ှိတော.ပဲ ကုလားပြည်တွေမှာ ကုလားကျွန်တွေအဖြစ် ကျွန်မျိုး၇ိုးအနေနဲ.ပဲ၇ှိတော.မယ်ဆိုတာတဘောင်ပေါ်ပြီးပြီ
အထက်ကလူတွေက ဘာသာေ၇းအဓိက၇ုန်းဖြစ်၇ုံပဲလုပ်တာ ALLAH ကိုတိုက်၇ိုက်မစော်ကားဘူး
မင်းကတော.ဘာသာေ၇းအဓိက၇ုန်းဖြစ်အောင်လဲလှုံဆော်တယ် ALLAHကိုလဲ ထပ်ခါထပ်ခါ စော်ကားတယ် ဒါကြောင်. မင်းကသူတို.တွေထက်ပိုပြီး ကံဆိုးမယ် အဖြစ်ဆိုးတွေအမျိုးမျိုးကြူံ၇မယ် သိပ်မကြာပါဘူး အလွန်ဆုံး NOVEMBER 2011 အထိပဲ ကျော်၇င်တော.မင်းဘဝသေတဲ.အထိ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကြပြီ အဲ.ဒီအခါမှာငါပြောခဲ.တာတွေကိုမင်းသတိ၇လိုက်
၁. ဆော်ဒီရေနံ ထွက်ပြီး ပိုက်ဆံအများကြီးရတာမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာတယ်လို့ မင်းတို့ကို ဘယ်သူပြောလဲ? ဆော်ဒီမှာ ချေးတွေကောက်စားနေရတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိသလား? အိမ်မရှိတဲ့ သူတောင်းစားတွေ ဆော်ဒီမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သိသလား? စောက်ကျွန်ကုလားတွေ.. ဘာမှလဲ ဗဟုသုတမရှိပါလားကွာ။ မလေးရှားမှာ မွတ်ဆလင်မတွေက ဖာခံစားတယ်။ မွတ်ဆလင်အထီးတွေက ဓါးပြတိုက်စားတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို ပိုင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာ တရုတ်တွေကွ။ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေ တရုတ်တွေ လီးကို စုတ်ပြီး အသက်ရှင်နေရတာ မသိဘူးလား? ၀ါးဟားဟား
၂. မျက်မှန်တင်ဦးကို Allah က ဒဏ်ခတ်တယ်? ပြဿနာအရင်းခံဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahပဲ မဟုတ်လား? သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် အစား.. Allah သူ့ပါးကို ခွေးချေးသုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ သူ့ဖာသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကလဲ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ပါးကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ရိုက်ပြစ်သင့်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
၃. ALLAH ကိုဆော်ကားမယ့်ရှုမောင်ကို ဒဏ်ခတ်တယ်? ပြဿနာအရင်းခံဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahပဲ မဟုတ်လား? သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် အစား.. Allah သူ့ပါးကို ခွေးချေးသုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ သူ့ဖာသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကလဲ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ပါးကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ရိုက်ပြစ်သင့်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
၄. တင်ဦးS2 ကို ဒဏ်ခတ်တယ်? ပြဿနာအရင်းခံဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahပဲ မဟုတ်လား? သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် အစား.. Allah သူ့ပါးကို ခွေးချေးသုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ သူ့ဖာသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကလဲ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ပါးကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ရိုက်ပြစ်သင့်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
၅. ထောက်လှမ်းရေးခင်ညွှန့်အဖွဲ့ကို ဒဏ်ခတ်တယ်? ပြဿနာအရင်းခံဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahပဲ မဟုတ်လား? သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် အစား.. Allah သူ့ပါးကို ခွေးချေးသုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ သူ့ဖာသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကလဲ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ပါးကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ရိုက်ပြစ်သင့်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
၆. အစ္စရေးကို ဒဏ်ခတ်တယ်? ပြဿနာအရင်းခံဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahပဲ မဟုတ်လား? သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် အစား.. Allah သူ့ပါးကို ခွေးချေးသုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ သူ့ဖာသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားတွေကလဲ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ပါးကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ရိုက်ပြစ်သင့်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
ဟေ့ကောင်… အဲဒီ မကောင်ဆိုးဝါးတွေကို Allah တစ်ကောင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တာပဲ။ နောက်နောင် အဲလို မကောင်းတာတွေ မလုပ်အောင် . .. မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allah ကို ချီးတွင်းထဲနှစ်ပြီး သတ်ပြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ Allah ချီးတွင်းထဲမှာ သေသွားရင်.. မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ထပ်ပြီး ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်